Arzantina, ny Governemanta sy ny Papa Fransoà · Global Voices teny Malagasy
Arzantina, ny Governemanta sy ny Papa Fransoà
Voadika ny 15 Marsa 2013 4:05 GMT
Vakio amin'ny teny English, Português, Aymara, Français, Dansk, Deutsch, Español
Raha niandry ny valim-pifidianana izao ho Papa vaovao izao tontolo izao, efa nanantena ny Arzantina fa olona mpiray tanindrazana aminy no ho voafidy ho Papa. Nanambara ny setroka fotsy nivoaka tao Vatikana fa vita ny fifidianana: zezoita voalohany sy papa Arzantina voalohany, Jorge Bergoglio – izay lasa Fransoà ankehitriny- no lasa Fahefana ambony eo amin'ny Fiangonana Katolika taorian'i Benoà XVI.
Tao amin'ny Twitter, niresaka momba izany tamin'ny alalan'ny tenifahatra isan-karazany ireo Arzantiniana tahaka ny #Bergoglio, #HabemusPapam, #PrimerasPalabrasDelPapa [es] (Voalohan-tenin'ny Papa), #LaBarraDelPapa [es] (mpankafy an'ny Papa), #FranciscoI [es], no ohatra amin'izany. Isan-karazany ireo fihetseham-po.
Ho an'ny maro, tsy nampoizina ny valim-pifidianana, tahaka an'i @JessyDelPino [es] izay nilaza hoe:
@JessyDelPino: Inonà?? Nifoha aho ary nahita fa nahazo Papa Arzantiniana isika! Nihevitra aho fa nivazivazy tamiko ity lahy antitra ity!!! #HabemusPapam #Bergoglio #Francisco1
Na ireo tsy mpino aza mba nizara ny fijerin'izy ireo ihany koa, tahaka an'i Lucero Aguirre (@LuuceroAguire) [es]:
Arzantiniana mankalaza ny nifidianana ny Papa Fransoà tao amin'ny Kianjan'ny Masindahy Piera tao Roma. Sary nozaraina tao amin'ny Twitter ho an'i @aciprensa
@LuuceroAguirre: Ny marina dia tsy mampino ahy ilay izy, tsy mpino aho ary tsinotsinona, saingy REHAREHA ny fahazoana Papa araka ny tokony izy! #Bergoglio
Tao amin'ny bilaogy Politika sy Politisianina [es], Rosa Alcántara namoaka indray ilay lahatsoratra niresaka momba ny fifandraisana tsy milamina eo amin'ny governemantan'i Cristina Fernández de Kirchner sy ny Papa vaovao. Olana maro samihafa no ifotoran'ny fahasamihafan'ny eveka teo aloha sy ny filoham-pirenena, ohatra amin'izany ny fanambadian'ny samy pelaka [es]:
Olana iray eo amin'i Kardinaly Bergoglio ifanoherany amin'ny governemanta ny Lalàna momba ny Fanambadian'ny lahy samy lahy sy ny vavy samy vavy. Tamin'ny 9 Jolay 2010, andro mialoha ny fankatoavana ny lalàna, nilaza ny taratasy misokatra avy amin'i Bergoglio fa ady amin'Andriamanitra ny fanambadian'ny lahy samy lahy sy ny vavy samy vavy izay mety hampitatra amin'ny fananganan-jaza ataon'ireo pelaka na lesbiana mifanambady.
Fifandirana hafa ihany koa no niseho nandritra ny fankalazana ny Revolisiona Mey, fetim-pirenena ankalazaina isan-taona ary tafiditra amin'ny Fomba Amam-panao Tedeum ao amin'ny Katedralin'i Buenos Aires. Na dia izany aza, tamin'ny taona 2008, nanapa-kevitra hanova ny toerana fankalazana ny filohan'i Arzantina. Bilaogy Radio Cristiandad naneho hevitra [es] (Radion'ny Kristiniana) momba izany toe-javatra izany:
Na dia efa nameno ny antontan-taratasy ilaina amin'ny fanovana izany aza ny governemanta, niteraka ahiahy teo amin'ireo vondrom-piangonana ny fanapaha-kevitra hanatontosa izany ao Salta, izay toerana fanaovana ireo karazam-pivavahana marobe. Nilaza ny governemanta fa ny “hampivondrona” mandritra ny fetim-pirenena no anton'izany.
Tsy nankasitraka ny toriteny fanoherana avy amin'ilay mpitondra fivavahana Arzantiniana, Kardinaly Jorge Bergoglio nandritra ny Tedeum tamin'ny 25 Mey ihany koa ny Filoha Cristina Fernández de Kirchner, tahaka ny nataon'ny vadiny efa nodimandry nandrindra ny fitondrany .
Tsaroan'i Arzantina ihany koa fa nandritra ny hetsika nataon'ny Filoha teo aloha Néstor Kirchner tamin'ny taona 2010, nosakanan’ny [es] fianakavian'i Kirchner tsy hitantana ny sakramenta ny solontenan'i Bergoglio .
Tao amin'ny bilaoginy Igualdad Dignidad [es] (Fahamendrehana Fitovian-jo) Gladys Lopreto nitsikera ny fihetseham-pon'ireo Episkopate Arzantiniana mikasika ny olana momba ny fanalan-jaza.
Nandritra izany, Arzantiniana maro no nankalaza ny vaovao mahafaly tsy ahitana resa-politika. Aracelli Crescimbeni (@aracellicres) [es] nanoratra hoe:
@AracelliCres:: Tsapan'i #Vaticano ihany na dia izany aza fa isika no tena mendrika manerantany #OrgulloArgentino (Argentinian Pride) #Bergoglio
Nirongatra ihany koa ny ventsoventso, tahaka ny an'i Miko (@Emi_Eguiazu) [es] izay nankalaza fa Arzantiniana ny papa vaovao fa tsy Breziliana, manao fanoharana mazava momba ny fifandrafiana amin'ny lalao baolina kitra eo amin'ny firenena roa tonta:
@Emi_eguiazu: #LaBarraDelPapa (Mpankafy an'ny Papa) ô ry Breziliana, ô ry Breziliana, toa kivy ianao, nahazo papa izahay, afaka tazonareo i Pelé
Mikasika ny fifandraisan'ny governemanta amin'i Bergoglio, Gabi (@GabiManducaa) [es] “niventso” hoe:
@GabiManducaa:: ô ry Cristina, ô ry Cristina, kivy loatra ianao, tsy kirchnerista ny Papa vaovao, inona indray izao no hafitsokao? #LaBarraDelPapa
Ary ny hafa kosa nanasokajy fa afa-manala azy ireo amin'ny fahotany i Fransoà, tahaka an'i Julian (@MatilaFonte) [es] izay nisioka hoe:
@MatilaFonte: ô ry Bergolio, ô ry Bergolio, tsy hiteny betsaka aminao izahay, nanota avokoa ny tsirairay tamin'ity taona ity, mba omenao famelan-keloka izahay amin'izany #LaBarraDelPapa
Etsy andaniny, filoha Cristina Fernández de Kirchner nizara teny fiarahabana [es] ho an'i Fransoà I tao amin'ny kaonty Twitter-ny (@CFKArgentina) [es].